"Business words?? ဂျပဂလစ်ရှ် ဂျပန်စာ" はロックされています。	Business words?? ဂျပဂလစ်ရှ် ဂျပန်စာ | Working Friends
Business words?? ဂျပဂလစ်ရှ် ဂျပန်စာ
Business words?? ဟယ်လိုဟယ်လို…….Jaglish ?????
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးပြုသော ကတကနစကားလုံးများ (သို့) နိုင်ငံခြားမွေးစားစကားလုံးများ
ဟယ်လို ဂျပန်စာပါ။ဂျပန်စာသင်ရတာ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သင်ဖူးသူတိုင်း နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ဖြစ်မှာပါ။
ဂျပန်စာမှာ ဟိရဂန၊ ကတကန၊ခန်းဂျီးဆိုပြီး ၃မျိုးတောင် ခွဲခြားထားလို့လေ။မခွဲလို့လဲ မရဘူးလေ
ဒီအတိုင်းရေးရင် ဘယ်စကားလုံးက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ မှန်းရတာ ခက်ပါတယ်နော်။ ဂျပန်မှာက အသံတူကြောင်းကွဲ စကားလုံးတွေများတဲ့အတွက် ခန်းဂျီးတွေနဲ့ တွဲရေးမှ ပိုမိုဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့။
貴社の記者は汽車で帰社した。＾＾ဒီလို ခန်းဂျီးနှင့်တွဲရေးထားတဲ့ ဝါကျဆိုရင် နားလည်မှုလွဲတဲ့ ပြဿနာ ရှင်းသွားတာပေါ့။ကျွန်မလည်း အရင်တနေ့ကမှ တွေ့လိုက်လို့ ထည့်ရေးလိုက်တာပါ။ဗဟုသုတပေါ့။ပြဿနာရှင်းပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်နော်။
လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကတကန စကားလုံး
ဂျပန်စာ အရည်အချင်းမြင့်မားတဲ့သူတွေတောင်မှ လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်ရင် နားမလည်တဲ့စကားလုံးတွေ တောင်လိုပုံနေပါတယ်။နေ့စဉ်မှာ လွယ်ကူတဲ့စကားလုံးတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ရုတ်တရပ်ကြားလိုက်ရင် အဓိပ္ပာယ်မပေါက်တာတွေပေါ့။ကျွန်မဆိုရင် အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာ ဘာမှကို နားမလည်လိုက်တဲ့အခေါက်တွေ မနည်းဘူး။
အဲ့ဒါကတော့ ဂျပန်မှာလည်း အင်္ဂလိပ်လိုတွေ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလိုတွေ ညှပ်ညှပ်ပြောတတ်လို့ပါ။ ဘာဆိုဘာမှ နားမလည်လိုက်တာပါ။ပါးစပ်လေးလှုပ်နေတာပဲ ငေးရတဲ့ဘဝပေါ့ကွယ်။ ပင်လယ်က လမင်းကို ငေးနေသလိုလိုလို ＾＾
အဲဒီစကားလုံးတွေကို စာရေးထားရင် တော်တော်ကို ဖတ်ယူရတယ်။ထားပါတော့။ အဲ့ဒီနားလည်ရခက်ခဲတဲ့စကားလုံးလေးများလည်း အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကတကနစကားလုံးများကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
သိတာတွေလည်း တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ပါမလားပဲ။ အစမို့လို့ basicကပဲ စလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်ရုံးသုံးတွေမှာတော့ ကတကနနဲ့ပဲ ညှပ်ညှပ်ပြောလေ့ရှိတာပါ။
1. アサイン(assign) တာဝန်ပေးအပ်။
アサインする တာဝန်ပေးအပ်သည်။アサインされる တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။
ဂျပန်စာလိုဆို 任命するဖြစ်ပြီး၊အဲ့ ထက် ပိုသုံးတာက ဒီစကားလုံးပါ။ ပရောဂျက်အတွက် တာဝန်လွှဲအပ်ခံရတယ်တို့ဘာတို့ပေါ့။
eg, 新しいプロジェクトの代表者としてアサインされた。ပရောဂျက်သစ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အနေနှင့် ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။
2. アジェンダ(agenda) plan၊ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်
アジェンダシート အစည်းအဝေးမှာ သုံးမဲ့ ဇယားတို့ကို ခေါ်ပါတယ်။ဂျပန်လိုဆို 議題、予定
Eg, これが今回のアジェンダです。ဒီဟာက ဒီတစ်ခေါက်အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးမဲ့ အကြောင်းအရာပါ။
3. アライアンス(alliance) ပူးပေါင်း၊ချိတ်ဆက်
アライアンスパートナー ပူးပေါင်းဖက်ကုမ္ပဏီ၊ စီးပွားဖက်
Eg, アライアンスを結んで、事業を拡大しましょう。 တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး၊လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ရအောင်။
4. トップページ(top page) ဟုမ်းပေ့ခ်ျပထမစာမျက်နှာ( HOME)မျက်နှာစာကိုခေါ်တာပေါ့နော်။
Eg, トップページのデザインはもっとシンプルに…. Top Page ဒီဇိုင်းကိုပိုပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး
5. アポ apo (appointment) အလုပ်ကြိုတင်ချိန်းဆိုချက်
Eg, ABC社のYさんとのアポが取れました。 ABCကုမ္ပဏီက Mr.Yနှင့် ချိန်းဆိုလို့ရသွားပါပြီ။
6. テレアポ ကုမ္ပဏီဘက်မှဖုန်းဆက်ချိန်းဆိုချက်။
ဖုန်းမှတစ်ဆင့် မိမိ၏လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများ၊ဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
Eg, テレアポのアルバイトに応募したいですが、 အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို လျှောက်ထားချင်လို့ပါ။
7. テレオペ ဖုန်းအော်ပရေတာ။customerဆီမှ မေးမြန်းလာမှုကို ဖြေဆိုပေးခြင်း
8. テレマtelema ( telemarketing) call center မှတစ်ဆင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း။ (ဖုန်းဆက်ချိန်းဆိုခြင်း+ဖုန်းအော်ပရေတာ)
Eg,テレマのコツを教えてください。 Telemarketing နည်းလမ်းလေး ပြောပြပါအုံး။
9. MTG (meeting) အစည်းအဝေး
10. OJT (on the job training) အလုပ်လုပ်ရင်း သင်ယူခြင်း
11. オンスケ (on schedule) အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်မြောက်နေတယ်၊ အစီအစဉ်အတိုင်းပဲ
Eg, このプロジェクトはオンスケで進んでいます ဒီပရောဂျက်က အစီအစဉ်အတိုင်းပဲ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
12. クォーター (quarter) နှစ်တစ်နှစ်၏ ၄ပုံ၁ပုံ။ ၃လတစ်ဖြတ်ပေါ့၊
ဂျပန်လို　四半期 (Q1,Q2,…)
Eg, 第一クォーター（Q1）の売り上げ目標は　１００万円です。 ပထမ၃လဖြတ်ရဲ့ မျှော်မှန်းအမြတ်ငွေက 1သန်း ဖြစ်ပါတယ်။
13. シフト အလုပ်ချိန်အပြောင်းအလဲ၊ シフト制
Eg, 勤務時間はシフト制です。 အလုပ်လုပ်ချိန်က ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
14. コアタイム (core time) မဖြစ်မနေ အလုပ်လုပ်ရမယ့်အချိန်အပိုင်း။
(ဥပမာ- မနက် ၁၀နာရီမှ မွန်းလွဲ၃နာရီအတွင်း မဖြစ်မနေ အလုပ်ဝင်၊ ကျန်တဲ့အချိန်က အချိန်ရွှေ့လို့ရ)
15. タスク(task) အလုပ်တာဝန်၊
Eg, 今日のタスクは売上率を計算する作業です。 ဒီနေ့ တာဝန်ကတော့ အမြတ်ငွေနှုန်းကို တွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
16. KGI (Key Goal Indicator) ပရောဂျက်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် (ပန်းတိုင်)
17. KPI (Key Performance Indicator) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စေရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အစီအစဉ်များ ၊
ဒီနှစ်မျိုးကတော့ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ကို ဆိုလိုပေမဲ့ ကွဲပြားချက်ရှိပါတယ်။
Eg, 日々のタスクKPIはKGI達成のためです。 နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများရဲ့ ဦးတည်ချက်က KGIဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ပါ။
18. コンバージュン （conversion）(အင်တာနက်မားကတ်တင်းအသုံးအနှုန်း) သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း customer တိုးပွားလာခြင်း ( ဥပမာ – အလုပ်လျှောက်ထားမှု ဦးရေများပြားလာခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်များပြားလာခြင်း)
Eg, 応募が多くなり、今月のコンバージュンレートもよくなってきた。 လျှောက်ထားမှုများလာလို့ ဒီလရဲ့ သုံးစွဲသူဦးရေနှုန်း မြင့်တက်လာပါတယ်။
19. ナレッジ ( knowledge) ကုမ္ပဏီအကျိုးအမြတ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာ (ရိုးရိုးတမ်းတမ်း ဗဟုသုတကို ပြောတာ မဟုတ်ဘဲ အကျိုးရှိစေမဲ့ နည်းလမ်း၊ပညာရပ်ဆိုင်ရာကို ပြောပါတယ်)
Eg, ナレッジを共有するため、MTGをします。 သိထားတဲ့နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးဖို့ အစည်းအဝေးကျင်းပပါမယ်။
20. アプローチ (approach) customerအား ချဉ်းကပ်ခြင်း
21. プレゼン (presentation) (အားလုံးသိကြမှာပါ) ရှင်းလင်းတင်ပြ
22. ファクトベース (fact base) 論理思考 အချက်အလက်အခြေခံပြီး အလုပ်လုပ်ခြင်း (ဖြစ်ရပ်မှန်)
Eg, お客さんのニーズをファクトベースで考えよう。 Customerတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အချက်အလက်အပေါ်အခြေခံပြီး စဉ်းစားရအောင်။
23. タイト(tight) အချိန်ဇယားအပြည့်ဖြစ်နေ၊ တခြားအစီအစဉ်ထည့်လို့မရတဲ့အခြေအနေ
Eg, 今日はタイトなスケジュールで、食事会へいけません。 ဒီနေ့ အလုပ်အစီအစဉ်အပြည့်ဖြစ်နေလို့ စားသောက်ပွဲမသွားနိုင်ပါဘူး။
24. チェックシート (check sheet) စစ်ဆေးရမည့်ဇယား( အစီအစဉ်တွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်၊ အစီအစဉ်၊ ပစ္စည်းlist လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
Eg, チェックシートでご確認お願いします。 အစီအစဉ်ဇယားနှင့် ပြန်စစ်ကြည့်ပါအုံး။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းနဲ့ ကွဲပြားတာလည်းရှိသလို တူညီတာလည်းရှိပေမဲ့၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား ညှပ်ညှပ်ပြောတဲ့အခါ နားမလည်လိုက်တာတွေ အများကြီးပါပဲ။
မိတ်ဆွေတို့လည်း ဂျပန်စာလေ့လာရင်း ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါစေ။